ကုန်ကြမ်း Cytomel (T3) အမှုန့် (55-06-1) hplc≥98% | AASraw အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့်
T3 (Cytomel) အမှုန့်
/ ထုတ်ကုန်များ / Prohormone / Cytomel (T3) အမှုန့်
2.75 ထဲက5အခြေခံ4ဖောက်သည် ratings
SKU: 55-06-1. အမျိုးအစား: Prohormone
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Cytomel ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (T3) အမှုန့် (55-06-1) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Cytomel (T3) အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
Cytomel (T3) အမှုန့် ဇာတ်ကောင်
အမည်: Cytomel (T3) အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 205 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
Cytomel (T3) အမှုန့်သုံးစွဲမှုကို
ထို့အပြင် Cytomel, Cynomel, Cyronine, Cytomel တဲပ်များ, Euthroid, Linomel, Liothyronin, Neo-Tiroimade, Ro-Thyronine, T55 အမှုန့်, Tertroxin, Thybon, Ti-Tre, Tiromel, Tironina အဖြစ်လူသိများ Cytomel အမှုန့် (CAS 06-1-3) နှင့် Trijodthyronin ။
T3 အမှုန့်မရှိသလောက်သိုင်းရွိုက်ပြဿနာများဖြေရှင်းရန်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်သတ်မှတ်ထားသောလျက်ရှိ၏ ဒါကြောင့်များသောအားဖြင့် T4 နှင့်အတူသတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ အတိတ်ကာလ၌, cytomel အဝလွန်များအတွက်စီစဉ်ကုသမှုရှိ၏ သို့သော်တစ်ဦးနှလုံးရောဂါများအတွက်တိုးခြင်းနှင့်နှလုံးရောဂါစိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်လျှောက်လွှာများအတွက် T3 ၏ဆုတ်ခွာခိုင်းတယ်။
T3 ပရိုတိန်း, ဘိုဟိုက်ဒရိတ်များနှင့်အဆီ၏ဇီဝြဖစ်တိုးမြှင့်အဖြစ်နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်သွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်ဆယ်လူလာ level မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုသုံးနေစဉ်သင့်ရဲ့ဇီဝြဖစ်အလွန်တိုးတက်နေပါတယ်ကတည်းက T3 အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အဆီ burner ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့တစ်တွေမြင့်မားတဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်မှုနှုန်းနှင့်အတူပိုလျှံကယ်လိုရီကိုမီးရှို့ပါမယ်ကတည်းကသူတို့တစ်တွေမြင့်မားတဲ့ကယ်လိုရီကို pre-ပြိုင်ပွဲအစားအစာအပေါ်ဖြစ်မတတ်နိုင်နိုငျကွောငျး၌ဤကာယဗလအကျိုး။ သို့သော် T3 catabolic ဖြစ်ပါတယ် (သင်အလားအလာသိသိသာသာကြွက်သားထုထည်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်) နှင့်ရေရှည်အသုံးပြုခြင်းကိုအဖြစ်ကောင်းစွာအရိုးသိပ်သည်းဆလျော့နည်းကျဆင်းနိုင်ပါတယ်, သတိရပါ။
Cytomel (CAS 55-06-1) အကောင်းဆုံးအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ရက်ယူသည်။ T3 ၏အဆင့်ဆင့်စားသုံးမိပြီးနောက်အကြမ်းဖျင်း2နာရီမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး4နာရီအတွင်းကုန်ခမ်းလိမ့်မည်။ နေ့ကိုတစ်လျှောက်လုံး T3 ၏ရရှိနိုင်မှုနှင့် T3 အဆင့်ဆင့်၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပိုကောင်းအောင်, Multi-ထိုးလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအကြံပြုသင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။
multi-ထိုး T4 မှ T3 ပြောင်းလဲသင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်စုစုပေါင်းမှီခိုရှိခြင်းကိုရှောင်။
T3 တစ် Steroid တစ်မျိုးမဟုတ်ပါသော်လည်း, T3 Steroid တစ်မျိုးအသုံးပြုမှုကိုမြှင့်တင်ရန်မအချို့သို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ T3 သုံးနေစဉ်ပရိုတိန်းဇီဝြဖစ်၏တိုးမြှင့်ပမာဏ၏ဖြစ်နိုင်သောဖြစ်နိုင်သည်။
သင်မကြာခဏအနေနဲ့ဟို Steroid တစ်မျိုးသံသရာနှင့်အတူ T3 stacking ကာယဗလ၏ကိုဖတ်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင် clenbuterol မကြာခဏအလွန်ထိရောက်သော, Pre-ပြိုင်ပွဲအဆီ-အရှုံးစစ်အစိုးရကဖွဲ့စည်း T3 နှင့်အတူ stacked ကြောင်းအခြားထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။
အများစုမှာကာယဗလအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ထိရောက်စွာဒီမူးယစ်ဆေးကိုသုံးကြသည်။ အဆိုပါသိုင်းရွိုက်ဂလင်း T3 အသုံးပြုမှုပြီးနောက် "ပိတ်ပစ်" ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူပြဿနာများရှိခြင်းလူမျိုး၏ပုံပြင်များရှိပါတယ်။ စာပေဆန်းစစ်ထံမှကြောင့်သိုင်းရွိုက်ရောဂါများအတွက်မျိုးဗီဇအဲဒီမှာမပါလျှင်ပြန်လည်နာလန်ထူတစ်ဦးထက်ပိုသောဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ရပ်ကြောင်းပေါ်လာသည်။
အထူးသသိုင်းရွိုက်ထောက်ခံမှုများအတွက်ဖြည့်စွက်အခြားပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ အများကြီးရေးသား guggulsterones နှင့် forskolin အကြောင်းကိုဖောင်းပွခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးထုတ်ကုန်များအတွက်သိုင်းရွိုက်ထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ဖို့အဆိုပါစာပေပြည်နယ်များသို့သျော, လုပ်ဆောင်ချက်တိုက်ရိုက်ယန္တရား (s) ကိုစိတ်ပိုင်းဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ, ငါသည်သူတို့တိုးတက်လာသောသိုင်းရွိုက်စွမ်းဆောင်ရည်မှသာအနည်းငယ်အထောက်အကူဖြစ်စေနှင့်စံသိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းတုံ့ပြန်ချက်ယန္တရားဆင်းသက်လာစေခြင်းငှါအကျိုးကျေးဇူးများအများစု negates ကြောင်းကိုယုံကြည်ပါတယ်။ သို့သော်သူတို့တစ်တွေ T3 သံသရာပြီးနောက်သိုင်းရွိုက်ဂလင်း function ကိုပြန်လည်နာလန်ထူတွင်ကောင်းသောအမှုကိုအခန်းကဏ္ဍရှိနိုင်ပါသည်။
တစ်ပြိုင်နက်တည်းကြီးထွားဟော်မုန်း (GH) နှင့် T3 ၏အသုံးပြုမှုကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။ T3 အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်လာသောအခါ GH အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်နိုက်ထရိုဂျင် retention ကိုအတွက်ပုံမှန်တိုးဖယ်ထုတ်ပစ်သည်။
ဒီအကြိုးသကျရော, အရှင် igf-3 (55) ၏ bioavailability လျှော့ချ, ကြီးထွားမှုအချက်တစ်ချက် binding ပရိုတိန်းများကဲ့သို့အင်ဆူလင်အဆင့်ကိုတိုးမြှင့် T06 (CAS 1-1-5) မှစွပ်စွဲခဲ့သည်။ ကြီးထွားဟော်မုန်းပြီးသားကအရည်အသွေးကိုလည်းမီးလောင်နေတဲ့အဆီရှိပါတယ်, ဒါကြောင့် GH နှင့်အတူတစ်ပြိုင်နက်တည်း T3 သုံးစွဲဖို့မပိုကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သောပုံရသည်။
Cytomel လွယ်ကူစွာတစ်ဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေဖြင့်အလွန်အကျွံ flab လျှော့ချအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့်အတွက်သိုင်းရွိုက်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ဒါဟာသဘာဝသိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းအစားထိုးမှတဆင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Cytomel T4 နောက်ထပ်အသုံးပြုသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုတိုးတက်စေပြီးအစာအာဟာရကို digesting အဘို့ကြီးသောစွမ်းအင်ပေးထားပါတယ်။ ပုံမှန်ယူသောအခါ, Steroid တစ်မျိုးတစ်ဦးသည်သူ၏လျှော့ချဖို့တစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်သူမ၏အလေးချိန်ကူညီပေးသည်အဖြစ်ကျန်းမာသန်စွမ်းကိုယ်ဟန်အနေအထားခံစားရန်ကူညီပေးသည်။
ကျနော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းကိုပိုကောင်းအောင်နိုင်ရန်အတွက် Cytomel သုံးပြီးများစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိပါတယ်စောငျ့ရှောကျနိုငျသညျ။ ဒါဟာနောက်ထပ်ပရိုတိန်း synthesize မှခန္ဓာကိုယ်များ၏စွမ်းရည်ကိုတိုးပွားစေပါသည်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ယေဘုယျအားဖြင့်မြင်ကြသည်ဟိုစတီရွိုက်နှင့်အတူအုပ်ချုပ်ခွင့်မရသည့်အခါက catabolic အဖြစ်ပြုမူသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီသို့မဟုတ်ကာယဗလခေါ်အဖြစ်စေးကပ်အဆီသွန်းများအတွက်ဂုဏ်သတင်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာမကြာခဏအမှန်ပင် Pre-ပြိုင်ပွဲအစားအသောက်များတွင်သို့ထည့်သွင်းနောက်ဆုံးအရာဖြစ်၏။ ဒါဟာ Diet ၏နောက်ဆုံးရက်အနည်းငယ်အတွင်းကိုသင်စွန့်ခွာရန်ဆန္ဒရှိပါဘူးရသောအဆီဖြစ်ပါတယ်။ Cytomel အမျိုးသမီးကာယဗလအကြားအလွန်ရေပန်းစားဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်။ မိန်းမများနှေးကွေးဇီဝြဖစ်သင့်သည်အတိုင်းလူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါကသူတို့ကိုအမှန်တကယ်ယှဉ်ပြိုင်ဘို့ညာဘက် type ကိုရရှိရန်အဘို့, ကဒီနေ့ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းများပေးအပ်အလွန်ခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ 1000 ကယ်လိုရီ / နေ့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကယ်လိုရီနှင့်အစားအစာများ၏အကြီးအလျော့ချရေး Cytomel အသုံးပြု. ရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။ ယုံမှားစရာမရှိ, အမျိုးသမီးများအမှန်ပင်ယောက်ျားထက်နေမကောင်းဆိုးကျိုးများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပိုမိုကျရောက်နေတဲ့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်နေ့လျှင် 50 mcg အကြောင်းကိုနှင့်အတူကောင်းစွာလျှောက်တွင်ရယူပါ။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေး6ကျော်ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်ဒီတော့အဘို့ကိုယူမဖြစ်သင့်ကြောင်းနောက်ထပ်အလွန်အရေးပါသည်။ Cytomel ကနေအနည်းဆုံး2လအတွင်း abstinence နောက်တော်သို့လိုက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အချိန်ကြာကြာ span ကျော်မူးယစ်ဆေးမြင့်မားသောက်သုံးသောယူပြီးပြည်သူ့နာတာရှည်သိုင်းရွိုက်မလုံလောက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏ခြိမ်းခြောက်မှုမှာရှိပါတယ်။
အဆိုပါကာယဗလစက်ဝိုင်း၌, Cytomel အဓိကအားဖြင့်တစ်ဦးအဆီဆုံးရှုံးမှုမူးယစ်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ အဆိုပါသိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းကိုယ်ခန္ဓာ၏ဇီဝဖြစ်စဉ်အားပြိုင်မှုအဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည်။ အဆင့်မြင့် T3 အားဖြင့်သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏ကယ်လိုရီပိုမိုရှို့ဖို့နဲ့ပိုပြီးလုံလောက်သည့်ကယ်လိုရီကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြု, လူတစ်ဦး၏ခြုံငုံဇီဝြဖစ်ထအမြန်နှုန်း။
အဆိုပါသောက်သုံးသောအကြောင်းပြောနေတာ, တဦးတည်း Cytomel အလွန်ထိရောက်သောသေးခိုင်မာတဲ့သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းဖြစ်သကဲ့သို့မြင့်မားသတိထားပါရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာတဦးတည်းရက်အနည်းငယ်၏သင်တန်းကျော်ဖြည်းဖြည်းနှင့်စနစ်တကျအတူတူပင်တိုးပွားလာနိမ့်ထိုးနှင့်အတူစတင်သည်အလွန်အရေးပါသည်။ အဆိုပါအားကစားသမားအများစုမှာနေ့ရက်တိုင်း 1 25mcg tab ကိုယူပြီးပြီးတော့3အပိုတက်ဘလက်များက4ရက်ဆေးထိုးတစ်ခုချင်းစီ 1 တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ တစ်နေ့လျှင် 100 mcg ထက်ပိုမိုမြင့်မားအချို့ကသောက်သုံးသောကဲ့သို့သောမရှိမဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးနှင့်ပင်အကြံပြုလိုတယ်မဟုတ်ပါဘူး။
Cytomel အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါဘယ်လို: ကနေ T3 အမှုန့် (CAS 55-06-1) ဝယ်ဖို့ AASraw
T3 အမှုန့်ချက်ပြုတ်နည်း (CAS 55-06-1):
Cytomel / T3 အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူကိုကူညီပါပါသလား?